UKhoza unqaba ukuvela kwabahlulwe icala eKZN | Isolezwe
UKhoza unqaba ukuvela kwabahlulwe icala eKZN
Izindaba / 13 September 2017, 09:53am / MLUNGISI GUMEDE
Makhosi Khoza Isithombe: Pando Jikelo/ANA
ILUNGU le-ANC ePhalamende uDkt Makhosi Khoza lithi ngeke lize livume ukuqondiswa ubugwegwe ubuholi bukaKhongolose KwaZulu-Natal obuchithwe yinkantolo.
Engxoxweni neSolezwe izolo, uDkt Khoza uthe uzoxoxa nommeli wakhe babheke ukuthi baya kanjani phambili ngemuva kwesinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu esithi ingqungquthela ye-ANC esifundazweni yahlala ngendlela engekho emthethweni nokuthi kumele ichithwe.
“Kade ngangisho ukuthi laba bantu abangithwesa amacala kwabona indaba yabo ayicacile njengoba bekumele baye enkantolo bayogeza amagama abo ngemuva kokumangalelwa, okwamanje ngizohlangana nommeli wami ngiphinde ngixoxe nezinye izazi zomthetho ngenhloso yokuthola izeluleko ukuthi kumele ngenze njani,” kusho uDkt Khoza.
Uthe uma uchithiwe kusho ukuthi zonke izinqumo zakho azikho emthethweni.
UDkt Khoza uthe iyabalulaza bewumbutho into yokuthi bathathelwe izinqumo yizinkantolo ngoba kusho ukuthi ubuholi obukhona abukwazi ukuphatha inhlangano.
“Nginenqwaba yezincwadi engizibhalele uNobhala-jikelele we-ANC uMnuz Gwede Mantashe ngimbhalela ngezinto eziningi ngisho ukuthi sengathi inqola ayihambi kahle, ngebhadi uma ukhuluma uvele ubukwe njengohlanya kuthiwe ukhuluma ngaphandle kwezinhlaka zombutho, kodwa uma ulandela imigudu awulalelwa,” kusho uDkt Khoza.
Uthe uKhongolose kumele uqale phansi wenze izinto ngendlela efanele, wangeza ngokuthi lokho uzokwenza ngokuhlonipha umthethosisekelo wenhlangano.
UDkt Khoza bekulindele ukuthi avele phambi kwekomiti eliqondisa ubugwegwe eKZN ngempelasonto esiphuma kuyo kodwa icala lakhe langahlala ngemuva kokungafiki kwakhe.
UDkt Khoza umangelelwe ubuholi be-ANC esifundazweni obuchithiwe, bambeka amacala amabili elokungawuhloniphi umthethosisekelo wombutho nokudala udungunyane enhlanganweni.